Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Ururada » SKAL si ay u Doorato Madaxweynaha Cusub ee Adduunka: La kulan Burcin Turkkan, Turki-Maraykan ah oo ku dhiiraday inuu qaado caqabadan
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Shirarka • News • Dadka • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • video
Burcin Turkkan, Musharaxa Madaxweynaha Adduunka ee SKAL Orlando Christmas Party
SKAL waxay ku saabsan tahay saaxiibtinimada ka dhexaysa khubarada socdaalka iyo dalxiiska ee adduunka oo dhan. Waxay kaloo ku saabsan tahay qaab-dhismeed go'an oo bandhigyo heer sare ah oo ururkan ah. Lacagtu waxay ku joogsanaysaa madaxweynaha adduunka. eTurboNews wuxuu la kulmaa musharaxa kaliya ee shaqadan, Burcin Turkkan.
SKAL waxay ku saabsan tahay ka ganacsiga asxaabta dhexdooda.
Saaxiibadani waxay ku kala sugan yihiin 102 wadan oo caalamka ah.
Go-getter Maraykan / Turki ah ayaa isku dayaya inuu helo 55% ee lagama maarmaanka u ah codadka xaqiijinta Diseembar 10 ee Golaha Guud ee SKAL ee soo socda ee soo socda si uu u noqdo madaxweynaha xiga ee ururka caalamiga ah.
Burcin Turkkan ayaa ahaa madaxweynihii hore ee SKAL USA wuxuuna hadda isku dayayaa inuu helo codadka si uu u noqdo madaxweynaha xiga ee ururka.
Waxaa la aasaasay 1934, Skål International waa ururka kaliya ee xirfadlayaasha ah ee kor u qaada caalamka Dalxiiska iyo saaxiibtinimada, midaynta dhammaan qaybaha warshadaha Dalxiiska.
Waxaa dhiirigeliyay waayo-aragnimadooda iyo saaxiibtinimada caalamiga ah ee wanaagsan ee ka soo baxday safarradan, koox weyn oo xirfadlayaal ah oo ay hogaaminayaan Jules Mohr, Florimond Volckaert, Hugo Krafft, Pierre Soulié, iyo Georges Ithier, ayaa helay Naadiga Skål ee Paris December 16th, 1932.
Fikradda saaxiibtinimada caalamiga ah ee ka dhexeeya Xirfadlayaasha Dalxiiska ayaa koray, horraantii 1934-kiina waxaa horay u jiray 12 Naadi oo laga sameeyay shan waddan. Markaas ayay ahayd markii fikraddu soo baxday in la abuuro iskaashi, kaas oo isu keena dhammaan Naadiyada, iyada oo ujeedadu tahay in la kobciyo niyad-wanaagga iyo saaxiibtinimada qaybaha socdaalka iyo gaadiidka ee adduunka.
Ururka 'Association Internationale des Skål Clubs' (AISC) waxaa la aasaasay 28-kii Abriil, 1934-kii Hotel Scribe ee Paris, Shirweynihii Guud oo ka kooban 21 ergo, wakiillo ka socda 11 naadi, iyo laba goobjooge oo ka socda London, kuwaas oo si wadajir ah u doortay Guddiga Fulinta. , Hoos waxaa ku qoran guddoomiyaha Florimond Volckaert:
Maanta in ka badan 12923 xubnoodIsku soo wada duuboo maamulayaasha warshadaha iyo maamulayaasha, waxay ku kulmaan heer deegaan, heer qaran, heer gobol iyo heer caalami si ay uga ganacsadaan asxaabta dhexdooda in ka badan 318 Skål Clubs.
Qaybta aasaasiga ah ee Skål International waa naadiga, oo u shaqayn doona sidii isku xidhka Skål International ee hawlaha Skål ee gudaha xuduudaha juqraafiyeed ee naadiga.
Maanta eTurboNews Bandhiga Wararka Breaking News ayaa ku biiray kooxda SKAL Orlando, Florida ee xaflada SKAL Christmas-ka Burcin Turkkan oo ka qayb galaya
Burcin Turkkan wuxuu yiri:
Sharaf ayey ii ahayd inaan ka mid noqdo guddiga fulinta ee caalamiga ah ee Skål anigoo ah agaasimahaaga iyo madaxweyne ku xigeenkaaga 2dii sano ee la soo dhaafay. Si AGA soo socota oo dhici doonta Diisambar 10, 2021, saacadu markay tahay 5 subaxnimo CET waxaan u taaganahay doorashada si aan u noqdo madaxweynahaaga xiga ee Skal International World. Had iyo jeer waxaan u mahadcelinayaa taageeradaada buuxda iyo kalsoonidaada waxaanan sii ahaan doonaa adeegaaga wakhti kasta. In saaxiibtinimada iyo Skal.
Diisambar 6, 2021 at 09:33
Blog aad u wanagsan aad baan uga helay akhrintiisa Fadlan la wadaag xog badan oo mudan in la akhriyo iyo hagitaan khabiireed ayaa lama huraan u ah ganacsiyada bilawga ah si aad nala soo xidhiidho !!
Vernon wuxuu leeyahay,
Diisambar 6, 2021 at 04:54
Aad baad ugu mahadsantahay kor u qaadida Skal.
Waxaan jeclaan lahaa inaan kula kulmo Skype ama Zoom!
CETINAY AKSOY wuxuu leeyahay,
Diisambar 5, 2021 at 15:58
Waxaan ahay xubin ka tirsan Izmir/Turkiga SKAL. Marka loo eego qawaaniinta, ma jirto sabab aan loo dooran Burçin TÜRKKAN, oo ah musharraxa keliya,. Si kal iyo laab ah ayaan u taageerayaa.
amaahda xashiishka wuxuu leeyahay,
Diisambar 5, 2021 at 09:09
Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan qirto. Gudoomiyaha Ururka Caalamiga ah ee Skål. Golaha, Bernard Whewell, oo sidoo kale ku fadhiya Guddiga Fulinta. Barnaamijka kama dambaysta ah Soo-bandhigidda bogga cusub ee ereybixinta degdegga ah ee ka socda ICS Search oo ka dhex raadi ereyada ceshadka iyo qeexitaankooda.